‘ईन्टरनेशनल फिमेल राईड डे’मा युवतीहरुको बाइक दौड ! | Emedia Hub UK
Home Entertainment ‘ईन्टरनेशनल फिमेल राईड डे’मा युवतीहरुको बाइक दौड !
काठमाडौं । ईन्टरनेशनल फिमेल राईड डेको अवसरमा शनिवार विभित कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । इन्टरनेशनल फिमेल राइड डे को दिन फिमेल राइडर्सको भक्तपुर,कोटेश्वर सडक खण्डमा स्कुटरमा लामबद्ध देखिएका थिए,जहाँ रेसमान्डु भएको थियो ।
शनिबार विहान भक्तपुरको सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षालयमा भेला भएका यी फिमेल राइडर्स बेलुन उडाएर कार्यक्रमको शुरु गरेका थिए ।
मोटरस्पोर्टस्को माध्यामबाट महिला शसक्तिकरणको अभियान बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए ।
मे महिनाको बर्षेनी पहिलो शनिबार यो उत्सव विश्वधर मनाईने गरिएको पाईन्छ ।
यसबर्ष ‘जस्ट राइड’ नारा तय गरएको छ । जुनसुकै स्थानमा रहेका महिलाहरु पनि सवारी साधनमा चढेर उन्मुक्त आनन्द लिनेछ भन्ने ध्येयसँगै मनाइने फिमेल राइड डेमा राइडर्स युवतीहरु गोलबद्ध भएका हुन् ।
नेपाल अटोमोवाइल एसोसिएसन नासा अन्र्तगत मोटरसाइकल फेडेरेसशनको आयोजना रहेको थियो ।
यतिबेला बाइक लभर्स सातदोबाटोस्थित स्विमिङ कम्प्लेक्स परिसरमा भेला भएका थिए ।
जहाँ रेसमान्डु भएको थियो । शहरी युवामाझ सर्वाधिक लोकप्रिय एकमात्र मोटरसाइकल रेसिङ हो यो । स्विमिङ कम्प्लेक्सको रेसिङ ट्र्याकमा करिब ७ दर्जन युवतीहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् । मिडिया संयोजक एकराज सुवेदीका अनुसमर रेसमान्डुमा नोभिस अन्र्तगत दुई समूह र नेसनल गरी तीन समूहमा खेल सञ्चालन हुने बताईएको हो ।
नोभिस क्याटगोरी ए समूहमा १ सय ९८ सिसीसम्मका र नोभिस क्याटगोरीमा बी मा १ सय ९९ देखि २ सय ५० सिसी मोटरसाइकल राइडर सहभागी छन् । मोटरसाइकल स्पोर्ट्स लाइसेन्स प्राप्त राइडर्सले मात्र सहभागीता जनाउन पाउने यो बाइक दौड पाँचौ संस्करण अन्र्तगत हुन लागेको हो । नासाका महासचिव गोविन्द भट्टराइका अनुसार प्रतियोगितामा बिजेता, उपविजेतालाई नगद पुरस्कार, ट्रफी दिइनेछ ।
विश्व सुन्दरी एन्जेलिना जोलीले अर्को विवाह गर्दैछिन् !
कांग्रेस र माओवादीको चुनावी तालमेलका कारण ?